Daawo: Barlamaanka Somalia oo si buuxda u ansixiyey sharciga dowladaha hoose, Gobolada iyo degmooyinka Dalka – idalenews.com
Daawo: Barlamaanka Somalia oo si buuxda u ansixiyey sharciga dowladaha hoose, Gobolada iyo degmooyinka Dalka
Mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ansaxiyay hindise sharciyeedka maamullada gobollada iyo degmooyinka dalka oo ay maalmahan ka doodayeen. Tirada xildhibaanada kulankii manta joogay ayaa gaaraaya 142 xildhibaan halka in ka badan 130 xildhibaan ay fasaxyo ay ugu kala maqan yihiin dalka dibadiisa.
Qorshaha sharciyeedkaan oo ay baarlamaanka u soo gudbisay wasaarada arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ayaa waxaa uu horey u maray labo aqrin, iyadoo gudiga loo xil saaray ay mariyeen aqrintii sedaxaad. Dood kulul iyo falaqeyn dheer oo mudanayaasha baarlamaanka khamiistii iyo sabtidii ka yeesheen ka dib ayuu gudoonka barlamaanka galiyeen codeyn.
Gudiga baarlamaanka u qaabilsan arrimaha gudaha iyo maamulada gobollada iyo degmooyinka dalka ayaa maanta baarlamaanka hor keenay hindise sharciyeedkan ka dib markii ku daris iyo ka dhimis ay ku soo sameeyeen.
Waxaa u codeeyay hindise sharciyeedka 137 xildhibaan 2 xildhibaan weey diideen halka sedax xildhibaana ay ka aamuseeen.
Hindise sharciyeedkan maamullada gobollada iyo degmooyinka dalka ayaa muhiim u ah sameeynta maamullada gobollada iyo degmooyinka dalka.
Daawo: Xildhibaan Cali Khaliif Galeyr oo sheegay in dowlada waqti ku socdo qarkana u saaran tahay burbur haddeysan sida wax ku wado wax ka bedelin